यी युवतीको हट बेली डान्स एकाएक बन्यो भाइरल (भिडियो हेर्नुहोस) – PathivaraOnline
Home > भिडियो > यी युवतीको हट बेली डान्स एकाएक बन्यो भाइरल (भिडियो हेर्नुहोस)
यी युवतीको हट बेली डान्स एकाएक बन्यो भाइरल (भिडियो हेर्नुहोस)
admin July 28, 2020 भिडियो, मनोरञ्जन	0
आजभोलि समय र प्रविधिको बिका’ससंगै सामा’जिक संजालमा टिक टकको पनि उतिकै चलेको छ । टिकटकमा अनेक प्रकारका चर्ति कला देख्न पाईन्छ छोटो १५ सेकेन्डको यो भिडि’यो सवैको मन मुटुमा बसेको छ ।नेपालीको तथा संसारको हरेक व्यक्ति’ले चलाउने यापलाई सहि तरिकाले चलाउन सक्ने’ हो भने पनि उतिकाओ सहज र सजिलो हुन्छ ।
यो एउटा मनोरन्जनको सानो पाटो हो ।जसमा बिभि’न्न किसिमका भिडियो भाईरल हुदै आउछन ।चलेका गीतसं’गीत देखि रिय’ल कुरा सम्म पोस्ट गर्न सकिन्छ । पछिल्लो समय निकै लोकप्रिय बनेको टिकटक डाउनलोड गर्ने’को संख्या १ अर्ब ५० करोड पुगेको छ ।
चर्चित यो भिडियो पनि हेर्नुस्
राेचक प्रसङ्ग, अवस्य पढ्नुहाेला ।
आरतीको बिहे भयो बिहेपछि हरेक दिन अलिकति विष,आरती नाम भएकी एउटी युवतीको बिहे भयो । बिहेपछि आरती आफ्नो पति अनि सासू–ससुराका साथमा पतिघरमा बस्न थालिन् । केही दिनमै उनलाई महसुस भयो उनकी सासूसँग उनको सम्बन्ध सहज हुनेवाला छैन । सासूका साथमा बसेर बाँकी जीवन बाँच्न उनलाई असह्य कष्टकर हुने देखियो । सासू पुरानो विचारकी, बुहारी आधुनिक सोचाइकी । कुरा कसरी मिल्नु र ? दिनहुँ भनाभन हुन थालिहाल्यो ।
दिन बिते, महिना बिते र वर्ष पनि बित्यो । न त सासूले बुहारीका विषयमा तीता टीकाटिप्पणी गर्न छाडिन् न त बुहारीले मुख फर्काउन । समस्या झन्भन्दा झन् खराब हुँदै गयो । आरती आफ्नी सासूलाई एकदम घृणा गर्न थालिन् । जब समाजका अन्य मानिसका अगाडि उनले सासूप्रति आदरभाव र शिष्टता प्रकट गर्नुपर्ने अवस्था आइलाग्थ्यो, उनलाई असह्य हुन्थ्यो । उनी सासूबाट छुटकारा पाउने उपायका बारेमा सोच्न लागिन् । तर हाम्रो समाज यही हो, भनेजति सजिलै सासूबाट मुक्ति मिल्दैन । त्यसमाथि लोग्नेले त्यस समस्यालाई वास्तै गरिदिएन भने नारी एक्लैले विद्रोह गरे पनि केही हुनेवाला छैन ।
पितालाई छोरीको दुःखले दुःखी बनायो । उनले छोरीलाई प्रेमपूर्वक शिरमा थप्थपाए । उनले भने– ‘छोरी ! तिमीले आफ्नी सासूलाई विष खुवाएर मार्यौ भने ढिलोचाँडो पुलिसले पत्ता लगाएरै छाड्छ । तिमी जेल जानेछौ र मलाई पनि पुलिसले जेलको ढोकाबाट भित्र छिराउनेछ, किनभने विष दिएर षड्यन्त्रमा सघाएको आरोप मलाई पनि लाग्नेछ । यसो गर्नु ठीक हुँदैन ।’तर आरती आफ्नो ढिपीमा अडिग रहिन् । उनले भनिन्– ‘हजुरले मलाई विष दिनैपर्छ । जस्तोसुकै आपत् आइलागोस् बरु, तर अब म त्यस बूढीको मुख हेर्न चाहन्नँ ।’
पिताले केहीबेर सोचेपछि भने– ‘त्यसो भए तिम्रो खुसी ….। म के गर्न सक्छु र ? तर तिमीलाई पुलिसले हत्कडी लगाएर जेलमा हालेको देख्न म सक्तिनँ । मैले जसो भन्छु त्यसो गर्छौ भने मात्र म तिमीलाई विष उपलब्ध गराउन सक्छु । हुन्छ भने ‘हुन्छ’ भन …।’
‘मैले के गर्नुपर्छ त ?’ आरतीले भनिन् ।पिताले विषको एउटा पुरिया हातमा दिँदै भने– ‘तिमीले हरेक दिन यो विषको एक चिम्टी मात्र सासूको खानामा सुटुक्क मिसाउनुपर्छ । विषको यति थोरै मात्राले कोही मरिहाल्दैन, बरु बिस्तारैबिस्तारै नजानिदो गरी शरीर शिथिल हुन्छ, भित्रभित्रै ऊ रोगाउँदै जान्छ र छ महिनाजतिमा मानिस मर्छ । तिम्री सासूलाई तिमीले दिनहुँ अलिअलि विष खुवायौ भने उनी विषका कारणले हैन प्राकृतिक कारणले मरेकी हुन् भनेर सबैलाई विश्वास हुन्छ ।’
कमला घिमिरेको घरमा अमृतको पोइला गएकि श्रीमतिसंग भावुक दोहोरी, कमला समेत भावुक हुदै गाईन (भिडियो सहित)
उम्लिरहेको तेलमा डुबेर गुडिया जस्तो बालक यति कुरुप बने । शिशिर भण्डारीले उपचार खर्च दिए(भिडियो हेर्नुस)
पूर्व अधिराजकुमार धिरेन्द्रकि छोरीको यस्तो हर्कत, सामाजिक संजालमा भाइरल (भिडियो सहित)